सेक्स पावर बढाउने हो भने यस्तो जुस खानुस::Digital News Paper
सेक्स पावर बढाउने हो भने यस्तो जुस खानुस
प्रकाशित मिति :शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ Friday, May 18th, 2018
एजेन्सी । हालै बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार १५ दिनसम्म अनारको जुस खाने व्यक्तिको यौनच्छा भनेसम्मको हुन्छ । एडिनवर्गराज्यको क्वीन मारग्रेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सेक्सपावर बढाउने बिषयमा गरेको अनुसन्धान गरेका थिए । सो क्रममा कमजोर भनिएका केही पुरुष तथा महिलालाई राखी १५ दिन सम्म दिनहु एक गिलास अनारको जुस खुवाएका थिए ।
१५ दिन खाएको जुसले उनीहरुमा टेस्टोस्टेरोन हार्मेनका स्तर निकै बढ्यो । जव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ्यो , कमजोर ठानिएका पुरुष तथा महिलाहरुले एकाएक उत्कृष्ठ ढंगले यौनव्यवहार देखाउन थाले । विश्वविद्यालयका अनुसार यो अनुसन्धानमा २१ देखी ६४ वर्षका पुरुष र महिलामा गरिएको थियो ।
टेस्टोस्टेरोन हार्मेनले नै किशोर अवस्थामा पुरुषहरुमा दाह्री जुगा उमार्ने, स्वर परिवर्तन हुने , काखीमुनी रौ उमार्ने, तथा महिलाहरुको स्तनबढाउने काम गर्छ । त्यो संगै सेक्स इच्छा समेत बढाउदै लैजान्छ ।
बैज्ञानिकहरुको अनुसार टेस्टोस्टेरोन हार्मेनले महिला एडरेनल ग्लैण्ड र डिंवासयमा सकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्छ । जसले उनीहरुमा सेक्स गर्ने इच्छा बढाउछ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार १५ दिन लगातार जुस खादा टेस्टोस्टेरोनको स्तर १६ प्रतिशत बाट बढेर ३० प्रतिशत सम्म पुगेको पाइएको थियो ।
बीमा गराउने भन्दा माग दाबी बढी
भाइरसले आँखा पाक्ने प्रकोप फैलियो, यसको लक्षण र बच्ने तरीका
सुत्नु भन्दा पहिला यस्तो गर्नाले गर्मिमा पनि अनुहार सुन्दर अनि फ्रेश देखिन्छ….
स्वास्थ्य बिमामा करीब छ हजार आबद्ध
जान्नुहोस्: यस्ता छन् सुत्ने समय कपाल बाँधेर सुत्नका फाइदाहरु………….!
दैनिक एक स्याउ खानुस् धेरै फाइदा लिनुस्